ब्राजिलका माल्कोमलाई बार्सिलोनाले कति मूल्यमा भित्र्यायो? – Everest Dainik – News from Nepal
ब्राजिलका माल्कोमलाई बार्सिलोनाले कति मूल्यमा भित्र्यायो?
काठमाडौं, साउन ९ । ब्राजिलका युवा फुटबलर विंगर माल्कोमलाई बार्सिलोनाले फ्रेन्च क्लब बोर्डुअक्सबाट ३६.५ मिलियन पाउण्डमा क्लबमा भित्र्याएको छ । इटालियन क्लब रोमा जान तयार भएका माल्कोमलाई बार्सिलोनाले क्लबमा अनुबन्ध गरेको हो । ब्राजिलका युवा खेलाडी माल्कोम बार्सिलोनामा आवद्ध भएका छन्।
विंगर माल्कोमलाई बार्सिलोनाले फ्रेन्च क्लब बोर्डुअक्सबाट ३६.५ मिलियन पाउण्डमा क्लबमा भित्र्याएको हो। माल्कोमले बार्सिलोनासँग पाँच वर्षको सम्झौता गरेका छन्। स्वास्थ्य परीक्षणको लागि रोमा जान तयार भएका माल्कोमलाई बार्सिलोनाले बढी भाउ लगाएरमा क्लबमा अनुबन्ध गरेको हो।
यि पनि पढाै-
इटालियन स्ट्राइकरलाई दुई वर्ष प्रतिबन्ध, २० हजार जरिवाना !
फिफा वर्ष अवार्डका लागि मनोनित १० खेलाडी काे-काे ? नेइमार परेनन् !
माल्कोमको लागि रोमा र बोर्डुअक्सबीच ३५.५ मिलियन पाउण्डको सहमति समेत भईसकेको थियो। तर, बार्सिलोनाले माल्कोमको लागि ३६.५ मिलियन पाउण्ड तिर्ने भएपछि बोर्डुअक्सले अन्तिम समयमा आएर सम्झौता रद्द गरेको हो।
बार्सिलोनासंगको सम्झौतापछि माल्कोमले बाल्यकालको सपना पुरा भएको बताए। माल्कोमले बार्सिलोना विश्वकै महान क्लब भएको तथा मेरो बच्चा बेलाको सपना विपनामा परिणत भएको छ बताए। उनले समर्थकलाई खुशी बनाउने भन्दै सकेको मेहनत गर्ने बाचा गरे।
निकै छिटो र स्किलफुल मानिने माल्कोमले ब्राजिलको सिनियर टोलीबाट खेलेका छैनन्। तर, अट्याकिङ मिडफिल्डर माल्कोमले फ्रेन्च लिग वानमा ९६ खेल खेल्दै २३ गोल गरिसकेका छन्। -एजेन्सी
ट्याग्स: फुटबलर विंगर माल्कोम